Plastering - Henan Dhuxul Research Keming Farsamada Co., Ltd.
hawlaha Plasterer ee
Sida caadiga ah qandaraasle ayaa horey u bixisey oo dhan oo jawaan oo gypsum malaastaan in loo baahan yahay, iyo sidoo kale siin wax kasta oo dibadda oo biyo ah haddii guriga weli ma xiran. Markabka The plastering u baahan yahay in la keeno qalab iyo qalabka u gaar ah iyo mararka qaar keento in ay kuusha u gaar ah.
Waajibaadka in plasterer waxaa sida caadiga ah la filayaa in ay soo hooyaan.
Plasterer sida caadiga ah waa in caadiga ah marka hore ama maankiisa Cornerbead gal ridday (external) gees kasta oo gudaha guriga. Daryeelka waa la qaadi doonaa si loo hubiyo taas oo ka dhigaysa inay eegtaa waxay si toos ah derbigii iyo waa in ka badan oo xirfad isha ka badan wax kasta oo kale.
"Kuusha" yimaado Hababka badan; Laga bilaabo mesh silig ku lifaaqan by qabatooyin fasalada biraha culus u baahan in la lushaan musmaarro. Noocyo caaga sidoo kale jiraan.
Kuusha waa in la qiyaasay oo ka gooyay in size, daryeelka waxa laga soo qaatay oo aan in la leexiyo ama ku jiro dunta fidsan. In meelaha ka badan hal geeska kulmay; darfihiisa kuusha ee waa la baabbi'iyey, xagal iyo 2 ama in ka badan talooyin waxaa la geeyaa dhow wada sida la oggolaan; taabashada laakiin aan is dul saaran. Kuusha si buuxda loo daboolay ku malaastaan iyo sidoo kale inta kale ee derbiga iyo nuuraddii kaloo ka caawisaa in ay qabtaan waxa ay adag. Shayga la dhammeeyayna caleemo keliya maahee strip yar bandhigi biraha protrusion rukunka oo uu daboolay markii derbigu rinji. Taasi ayaa ka dhigeysa nadiif ah, kooner uu si toos ah u jeedday.
Hab kale oo lagu arkay in guryaha duqa ah ee la xirrira geeska a fekrado ama bullnosed isticmaalaa kuusha a quirked alwaax shaqaalaha. Kuusha Shaqaalaha, dowel 1 inch la qiyaastii 1/3 xiiray dhabarka, ayaa lagu wadaa on geeska dibadda by joiner on site, ku xidheen gelanayo alwaax dhigay gelin dun leben / block, ama in la jir qoryaha. Plaster waxaa ay kor u ordaan kuusha shaqaalaha ka dibna dib gooyaa degaanka in ay kuusha ama "quirked" si looga fogaado ku laayeen daciif baal meesha nuuraddii kulmay kuusha.
Naqshadaha quirk ah waa a 'V' yar channel qaabeeya loo isticmaalaa in dahaar iyo la siiyo gargaarka ah wax taaj oo kale fekrado convex. In la abuuro geeska malaasay dabadeed, taageerto jubbadda (Browning) waa la malaasay in kuusha shaqaalaha, ka dibna quirk la jarjar jubbadda taageero wax yar ka badan size dhamaystirtay ka. Marka jubbadda skimming sare waxaa laga codsadaa, mar kuusha waxaa si buuxda, ka dibna aan dux lahayn, iyadoo la isticmaalayo darafka a toosan, quirk waa dib-u-jaray si qoto dheer dhamaystirtay, sida caadiga ah on qiyaas xagal 45 digrii galay kuusha. Quirk The qarin doonaa crack yar ugu danbeyn in dhisi doono inta u dhaxaysa kuusha shaqaalaha iyo malaastaan.
Plasterer wuxuu u baahan yahay in la buuxiyo baaldi 5-gallon ah laabata biyo. From baaldi this uu lulataa uu trowel ama trowels iyo meelaha Dhexdeedana qalab kala duwan.
Sida caadiga ah plasterer uu leeyahay hal trowel for "gacmo" (habka of gelinayn dhoobo derbiga gal).
Qaar ka mid ah ka dibna sii trowel waayeel ah in uu leeyahay gacnta hufan u (qalooca mooska) ee loo adeegsado ujeedada "texturing"; haddii u yeedhay by mulkiilaha guriga. Trowel jiifay-on A socotaa in aad guri noqon for this iyo vacuum uu keeno biyaha u eekaan karaan si ay derbiga, isaga qasbo in ay jeex oo saasuu leeyahay in su'alaha aagga.
Ugu dambeyntii, mid ka mid ah ayaa laga yaabaa in Dhuxul trowel cusub "oo aan weli jebiyey-in" taas oo uu isticmaali doono "shiidi"; tani waa markii nuuraddii waa ku dhawaad adkaadeen oo uu yeeesha wixii kuuskuus ama buuxinta kasta lumo yar (cat ayaa wajahaya) si ay u sameeyaan eegno derbiga sida shiraaq uniform of dhalaalaya nuurad cad u.
Plasterers badankood waxay leeyihiin ay doorashada u gaar ah baaxadda trowel ay isticmaalaan. qaar ka mid ah mushtarka trowels dheer sida weyn sida 20 inches laakiin caadi ah u muuqataa in 16 "× 5". Waaya aragnimada aan brand doorbido waa bir Marshalltown a ahama. Waxay leeyihiin luster brassy iyaga ha u ahaatee, inaanu caag ah oo aan doona ama miridhku haddii si qalad ah ku hadhay habeen biyo halka qaar kalena ay door bidaan xadin trowel joogto ah taas oo u baahan dayactir badan laakiin waxay qaadataa waqti dheer ah oo Diisidda waxaa a ku siin karaan " qaniini "taas oo ka caawisa marka" dhameysteen "(pass la soo dhaafay markii nuuraddii waxaa dejinta).
Baaldi ayaa sidoo kale u dhaco burush badan oo loo isticmaalo in lagu biyo qarashgareeyo derbiga u gal si aad u nadiifiso iyo qalab uu, burush rinji ah geesood yeeesha, iyo haad geeska for sameynta geesood ah (in kastoo qaar badan oo share ka mid ah shimbir wanaagsan inaad qolka habboonaanta).
Baaldiyo qalab Kuwan waxaa marka hore lagu hayaa meel u dhow miiska isku dhafka ah ka dibna sida nuurad bilaabo inuu qarka u saaran yihiin ayaa u dhawaaday in derbigii la shaqeeyeen. Time noqdo arrin weyn halkan sida mar nuuraddii bilaabo inuu qallafin (set) samayn doonaa si cadaalad ah si degdeg ah oo plasterer leeyahay margin yar oo qaladka si aad u hesho derbiga siman.
Gal miiska isku dhafka plasterer sida caadiga ah oo dhigaya in uu "aboodiga" sidaasay ahaan doontaa anfacaya marka uu u baahan yahay in ay la wareegaan oo aad wada xajisaan wasakh off waxaa ka mid ah. Qashin kasta oo nuuraddii noqon kartaa buuq weyn.
Dushooda Plaster ama hoose?
Plasterers caadi qol, (gaar ahaan derbiga weyn ama sare-ceilinged) gelin sare iyo ka hoose kala qaybin doonaa. Mid ka mid ah ka shaqeeya on top samayn doonaa ka laayeen saqafka ee ku saabsan height caloosheeda iyo shaqeeyaan off shaqabaq caano ah 8-foot (2.4 m) saqafka ah, ama shaqeeyaan off stilts qolalka 12-foot-sare. Waayo, saqafka cathedral ama darbiyada aad u sarreeya, dhaqangalka waa la dhigay iyo mid ka shaqeeya ee kumpuyuutarka, dadka kale ee dheeraad ah ee hoose.
Nadiifi ka hor inta aysan ku dhameysan shaqo
Caadi sameeyo, shaqaaluhu. No globs malaastaan tagay on dabaqyada, derbiyada ama geesaha kuusha geeska. (Waxay kor u tusi doonaa haddii rinji iyo faragelin Gogosha iyo jar). Saar ama hir leenahay oo dhan qashinka.
Dhamaan qolalka, oo derbiyadeeda la kormeeraa waayo arrinkaas oo diisan ama xagashada in ay dhici karto in uu keeno dadka kale dhufatid galay derbiyada. Waxa ay sidoo kale kormeero si loo hubiyo ma kuuskuus hadhay on derbiyada ka rusheeyey nuurad ama biyo. Dhamaan qolalka la hubinayaa si aad u hubiso nuurad oo dhan waa la reebay ee warbaahinta si koronto ku rakiban kartaa saldhig iyo si loo hubiyo in qalabka lahayn waxaa ay ka tageen. Taasi ayaa ka dhigeysa derbiyada diyaar u ah Ranjiilayaasha iyo xidigaha ay u yimaadaan oo ay ganacsi.
farsamooyinka plastering Gudaha
milkiilaha guriga iyo Tababaraha plasterer ee caadiga ah ayaa go'aansan doona wixii Hababka ay isticmaali doonaan in guriga. Sida caadiga ah derbiyada waa siman iyo mararka qaarkood saqafka. Sida caadiga ah mulkiilaha a dooran doonaa in ay saqafka isticmaali a "texture" farsamo sida ay inta badan ka sahlan yahay, si dhakhso ah, iyo sidaas ka raqiisan yahay saqaf oo siman.
Qiimaha xigashooyin plasterer ku salaysan farsamada in loo isticmaalo iyo cagaha guddiga in la daboolo si qandaraasle ama mulkiilaha guriga ka hor inta shaqada aysan ka bilaabanin. cagaha Guddiga waa la helay by Barkhad ama lagu qiyaasay by qandaraas madaxa by tirinta wallboards ka iman heerka warshadaha ah 8 ilaa 12 'dheer. Ka dibna wuxuu ku darayaa in kharashka dheeraadka ah ee soffits iyo saqafka cathedral.
Saqafka labaad ama ugu horeysay
Sida caadiga ah, haddii saqafka waa in ay siman marka hore waxaa loo sameeyaa, derbiyada ka hor. Haddii ay tahay in la textured, waxaa la sameeyaa ka dib markii derbiyada.
Sababta tani waa in wariyaasha ay marka saqafka ah la shaqeeyay on nuurad ku dhici doonaan iyo qarashgareeyo gal derbiyada. Si kastaba ha ahaatee isku darka texture ah uma baahna in la smoothed soo baxay marka ay bilaabanto si ay u dejiyaan,
sidaas retardant ah sida "Cream of ilkeed" ama sonkor ah waxaa loo isticmaali karaa si ay u sii dheerayn markii goobta, oo si fudud laga xoqayna derbiyada.
iyo tan iyo wakhtigaas ma aha sida fogeynta ah arrin on saqafka textured isku dhaf ah oo waaweyn, ama dib-iyo-gadaal keegag waxaa la samayn karaa oo dhan saqafka daboolay waqti isku mid ah.
Sababta kale waa in shimbir waxaa inta badan ay maamulaan ay weheliyaan geeska top dib markii qabanayaan saqafka a siman, ka dibna waxa fudud yahay si ay u ilaaliyaan laayeen this by derbigii samaynaya la soo dhaafay. Laakiin saqaf textured sida caadiga ah uma baahna in la birded, kaliya milmay ee burush rinji aad u qoyan. Xaaladdan oo derbiga waxaa loo sameeyaa hore iyo geeska sameeyay shimbirta.
Waxa ugu horeeya ee plasterer waxay u egtahay in la sameeyo waa u gudbo oo dhan dun mesh-duubay derbiyada uu ku saabsan yahay si ay u daboosho, in swatch aad u dhuuban. Wallboard The barbaro qoyaan ka soo bixi this si marka plasterer tagaa waxa ka weyn mar kale marka ay qabanayaan inta kale ee derbigeediina waxaa inuusan ka tagi doonin kama tollayn ah diisnaan oo u baahan shaqayn dheeraad ah.
De markaas waa inuu buuxiyo aagga u dhow saqafka sidaas darteed ma yeelan doonaan in ay fidin si ay u gaaraan inta lagu jiro inta kale ee derbiga, Oo isna wuxuu foomamka geeska iyadoo uu shimbir. Tani badbaado badan waqtiga loo baahan yahay sida nidaamka this waa tartan kula jira fal-celin kiimikada.
From miiska isku dhafka ah plasterer ku qaadoyin qaar ka mid ah "dhoobo" eee xarunta uu dafo oo uu trowel. QABASHADA aboodiga in uu gacan ka baxsan oo uu trowel in aasaasiga ah uu plasterer ka dibna qaadoyin duudduuban ferjiga ee ku malaastaan gal uu trowel. this qaadataa qayb ka ah dhaqanka odaygii, gaar ahaan keegag soupy.
Markaas haysta barbar trowel in derbiga iyo xagal yar ee gacanta uu isku dayo in uu isku rogo nuuraddii derbiga u gal. In hab la mid ah squeegee ah. Waxa uu bilaabo oo ku saabsan inch ah ee kor ku dabaqa oo jidkiisa ka shaqeeya kor saqafka. Daryeelka waa la qabsaday in ay labis badan ee suurtogalka ah maadaama ay ka caawisaa in wajiga dhameystir.
ku xiran tahay waqtiga goob of nuuraddii ah. mar qoyaanka ee nuuraddii bilowday in la qaado by guddiga pass labaad la sameeyo. tani waxaa la yiraahdaa reebtay hoos. waa badan sida codsiga rinjiga la duubin in tallaabo curcurka iyo ujeedada. in la simi baxay khadadka kasta oo buuxi kasta oo hulalka waaweyn in ka dhigi doonaa shaqo dheeraad ah mar nuuraddii bilaabo inuu si dhab ah loo dhigay. cadaadis aad u yar waxaa laga codsadaa oo trowel waa la hayaa xad guri dhinaca derbiga.
Mararka qaarkood accelerant ah lagu dari doonaa isku dhafka ah u Dedejisanaysaan dib u dhac waqti ka wajiga hore ee isku dhafka markii nuuraddii bilaabo si ay u dejiyaan. Tan waxaa caadi ahaan sameeya maalmaha qabow marka la dejinayo waa raagay ama shaqooyin yar si loo yareeyo sugitaanka.
Marka nuuraddii waa derbiga dul jooga oo uu bilaabo inuu dhigay (this la go'aamin karaa by miiska in marka hore sharxayaa), plasterer ah si taxadar ku rusheeyo biyaha derbiga u gal, this ka caawisaa in ay hakad u samaynta iyo in la abuuro warqada ah. Ka dibna wuxuu isticmaalaa uu trowel iyo inta badan burush ayay ilmadeeda dareemay qabtay gacanta ka soo horjeeda oo weliba derejo yar ku saabsan derbiga ka hor trowel in ay ka shaqeeyaan warqada this galay wixii ka maqan yar (oo loo yaqaan "catfaces") ee ku malaastaan iyo sidoo kale la simi baxay xunxunna ah jiifay-on iyo fidi kasta goobooyin hawo ah in la sameeyay inta lagu guda jiro dejinta.
Tani waa markii muhiim ah sababta oo ah haddii derbigii aad u adag tahay ku dhawaad macquul aheyn in aad ku buuxisid dhimman kasta sida warqada mar dambe dhigay doonaa derbiga waa iyo halkii kaliya engegan oo dhici doona. Tani waxay keenaysaa in loo baahan yahay waxa loo yaqaan "shiidi" sida waa mid ka mid ah derbi adag tago mar kale iyo mar isku dayayaan in ay la simi baxay derbiga ka sii qallafsanaaday iyo wixii catfaces waaweyn waa in la buuxiyaa la Putty dusha a, xarunta wadajir ah, ama su'alaha ay qasayso ee cusub, jaakad khafiif ah.
Derbiga dhammeeyayna ay eegi doonaa dhalaalaya iyo isku guri oo waa siman yahay marka la taabto. Dhowr maalmood ka dib waxa uu noqon doonaa jeeso cad ka dibna la rinji karaa.
From markii bacaha waxaa lagu tuuray galay foosto si markii derbigu si buuxda u dhigay waxaa lagu magacaabaa isku dhaf ah. Kala duwan oo ku saabsan farsamada ee loo isticmaalo iyo in accelerant ama retardant lagu daray, oo isku jira sida caadiga ah waxay qaadataa qiyaastii laba saacadood.
The daqiiqado final ah kuwa ugu Hadaba haddii ay tahay siman ama haddii isku dhafka ah oo dhigaya dhakhso badan la filayay. Haddii ay taasi dhacdo waxaa uu sheegay in isku dhafka ah ayaa "wareegtay" oo sida caadiga ah waxaa sabab u ah isticmaalka sheyga jir ama noocyada kala duwan ee cimilada (qoyaan ama kulul maalmood keeni kartaa Malaas si ay u dejiyaan dhakhso). Sida caadiga ah oo kaliya seddex ama afar keegag waxaa lagu sameeyey maalintii sida plastering waa mid aad u daalo oo aadan ahaan sida wax ku ool ah hoos nalalka adaanaha bilihii la fiidkii hore.
plastering waxaa loo sameeyaa sanadka oo dhan, laakiin dhibaatooyin gaar ah ka imman kartaa xilli xilli. In xagaaga, kulaylka hidde u keeni nuuraddii si ay u dejiyaan si dhakhso ah. Malaas ayaa sidoo kale abuuraa ay kulaylka iyo guryo noqon karaan kuwo ku soo gebagaboobaan. Sida caadiga ah shaqaalaha markabka nuuraddii isku dayi doonaa si ay u yimaadaan guriga si fiican ka hor waaberiga.
In bilaha jiilaalka, maalmaha gaaban keeni baahida loo qabo of nalalka aan dabiici ahayn. At xaglo qaarkood nalalka, kuwaas oo xitaa ka dhigi kartaa fiiriyaan smoothest derbiga sida dusha sare ee dayaxa. Dhibaato kale ee bilaha jiilaalka waxaa u baahan in la isticmaalo kululeeyayaasha jet propane (oo jebiyo kartaa nuuraddii hurdi laakiin ma si kale u yeelin), ma ahan oo keliya in ay sii plasterers diiran laakiin in sidoo kale biyaha ee isku dhafka ah looga hortago qabowga iyo guud ahaan kiristaalo baraf ka hor inta uusan ku malaastaan uu leeyahay waqti ay ku dhigay. Sidoo kale haddii tuubada biyaha si fiican ma miiro ka hor inta uusan u Xayiraadda kartaa habeen iyo noqon mid dhamaystiran oo kor u joojiyay subaxdii.
Texturing waxaa caadi ahaan loogu talagalay armaajo, saqafka iyo derbiyo garaashka. [Yeerida loo baahan yahay]
Sida caadiga ah wakiilka xakamaynayay la daray in ay isku dhafka ah. taasi waxa ay caadiyan waa Cream of ilkeed (ama "daroogada" in erey-plasterer ee) iyo daryeelka waa in loo qaato xaddiga ku daray. Aad u badan oo isku dhafka ah waxaa laga yaabaa in marnaba dhigay oo dhan. Si kastaba ha ahaatee lacagta loo isticmaalo waxaa inta badan lagu qiyaasay; badan jidkii mid ku darayaa dumisaan ka mid ah cusbo miidhan ah. waxaad ku dari qaadada yar oo retarder, ku xiran size ee isku dhafka ah. Retardant lagu daray si keegag weyn waxaa la samayn karaa, tan iyo farsamo dareen taabasho ah uma baahna qofka in ay sugaan ilaa ay bilowdo inay ka hor inta shaqada dhigay.
Jiifay-on Wejiga waa isku mid sida siman laakiin waxaa la raaciyay huwanaa dhumuc weyn. Marka jubbadda waa isku plasterer ka dibna dib u dhaco iyo Shimbiraha geesood uu. Ku sugnaanta dhankiisii uu markaas helo trowel la qalooca ah muuska fiican waxa ku jira oo ay soo derbigay kor u dhaafaan in tiradaasi siddeed ama hannaankii ESS bilaabo, in la hubiyo in ay ka gudbaan dhammaan meelaha ugu yaraan hal mar iska. Waxa uu intaas ku daray in yar ku malaastaan dheeraad ah si uu trowel haddii loo baahdo. Saamaynta guud ahaan waa lakab oo rumoobay sedexdii rinjiga-sida badan oo dhan saqafka ama derbiga. Wuxuu markaas uun iska socon kara oo ha u qotomiyey daryeelka qaaday aan aad u reebin globs iyo si loo hubiyo in labada geesood ay eegi macaan oo toosan dhigi.
Haddii derbi waa in siman iyo saqafka textured, caadi ahaan derbiga waxaa marka hore laga sameeyey, ka dibna saqafka ka dib markii derbigii ayaa. Halkii rebirding saqafka (kaas oo lagu samayn doono markii derbigii la saaray), trowel nadiif ah waxaa la qabtaa derbi ku dhacaya iyo geeska waxaa maamula weheliyaan saqafka in ay "iska jar in" oo nadiif ah derbiga waqti isku mid ah. Line Tan waxaa ka dibna smoothed la buraashka rinjiga a si ay u sameeyaan guurka aan xuduud lahayn.
geed isbonji la The (farsamo loo yaqaan birtiina a), uu leeyahay qaab goobo ah oo dusha ka da.ay. waxaa go'an in ay taageero la Tumeeya dhexe oo si xun ugu waa size ee trowel caadiga ah. Isbonji waa farsamo texture kala duwanaansho ah oo sida caadiga ah loo isticmaalo on saqafka iyo mararka qaarkood qoolal qarsoon. Sida caadiga ah marka la isticmaalayo geed isbonji la, ciid lagu daraa isku darka iyo farsamada waxaa lagu magacaabaa ciid-geed isbonji la.
Daryeelka waa in la qaataa oo aan si toos ah u istaagaan ka yar aad trowel marka waxan u samaynaysaan sida ay tahay aad iyo aad u xun, oo halis ah si aad u hesho hadhuudh ah oo ciid ah ee ishaada, oo ugu darsamey cuncun ka soo liin iyo sidoo. Isku darka Tani waxay si fudud u xoqin karo isha.
Isku dhafka ah ku jiifay-on iyo waa isku mid sida la texturing joogto ah. si kastaba ha ahaatee ka dib markii labis iyo jubbad siman waxaa la dhigayaa on saqafka iyo geesaha waa la baabbi'iyey, in, isbonji gaar ah qaab la riixo ah waxaa maamula guud ahaan saqafka in dhaqaaq noqnoqashada oo wareeg ah. Tani waxay qaadanaysaa xirfad qaar ka mid ah oo ay ku dhaqmaan in ay si fiican u sameeyaan.
Muuqashada guud ahaan waa qaab nooca fishscale a on saqafka, derbigii armaajo, iwm Inkasta oo retarder waxaa caadi ahaan loo isticmaalo; daryeelka waa in loo qaato si aad u nadiifiso soo baxay geed isbonji la si fiican markaad dhamaysid, sida wax ku malaastaan in engejiyaa gudaha waxa ay noqon doontaa wax aan macquul aheyn in meesha laga saaro.
Stilts waxaa inta badan looga baahan yahay inay ku malaastaan saqafka ugu waana caadi ahaan adag tahay in la jiifay-on iyo shaqeeyaan badan derbiyada. Waayo, saqafka gaaban mid sidoo kale la kartoon caano shaqeyn karaan. Dhib ah ee ka yeellay korkoodii shaqeeya inta badan keenta in bambooyin ku malaastaan splattering on dabaqyada, derbiyada iyo dadka hoos ku qoran.
Tani waa sababta saqafka siman, in ay isticmaalaan ma retardant iyo mararka qaar xitaa accelerant, waxaa lagu sameeyey derbiyada ka hor. Dhac Malaas si fudud laga xoqayna kartaa off derbi siman malaastaan markii qoyan. Splatters kasta oo ka soo xad siman si fudud laga xoqayna kartaa off blueboard dhashay laakiin aan ka derbi horay malaasay dabadeed. Daryeelka waa in la qaato marka hoos aad trowel ama plasterer kale taagan.
Adkaanta guud ee ka shaqeeya saqafka siman landcruiser qiime sare. Farsamada waa isku mid sida derbi siman laakiin xagal sirgaxan for plasterer ah.